Ithetha ntoni uyilo lokuhlela? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje, amandla okubonakalayo ibe yinto engenakuphikiswa kwaphela, kuba uninzi lolwazi olufunyanwa ngabantu yonke imihla luza kubo ngamehlo, ukongeza, kungqinwe ngokwenzululwazi ukuba abantu ukwanda kwememori ebonakalayo kuthelekiswa nokuva.
Kungenxa yesi sizathu ukuba inkangeleko yomzimba iqala ukuba nokubaluleka okukhulu Kunye nomfanekiso obonakalayo, njengoko abantu befunda ngcono ukusetyenziswa kwemizobo okanye imizoboBanobuchule bokukhumbula ngcono umfanekiso ngokulula kunombhalo kwaye bonwabile nangakumbi kuyilo oluhlala lucocekile, lulula kwaye lucwangcisiwe.
1 Ngaba uyazi ukuba luyilo luni lokuhlela?
2 Yintoni ukubaluleka koyilo lohlelo?
Ngaba uyazi ukuba luyilo luni lokuhlela?
Ezi ndawo zibonakala zibalulekile kwindawo eyaziwayo uyilo lokuhlelaOko kukuthi, elo sebe loyilo lwegraphic lukabani Eyona njongo iphambili kukubekwa nokwenziwa kwalo naluphi na uhlobo lopapasho, nokuba ziimagazini, iincwadi, amaphephandaba, phakathi kwezinye. Ngaphaya koko, owona msebenzi uphambili womyili oyingcali kukuza noyilo olwaneleyo inomtsalane kwaye iluncedo kubafundi, ekwalawula ukufezekisa imvisiswano efanelekileyo phakathi kwale fom kunye nomxholo wayo, ngendlela eya kuthi ibonelele ngomgangatho omkhulu wesitayile kupapasho kwaye kwangaxeshanye ivumele ukuba ibe nomfanekiso olungileyo phambi kwabaxumi.
Yintoni ukubaluleka koyilo lohlelo?
Kulo naliphi na ishishini, nokuba liyahlelwa okanye loluphi na uhlobo, abantu bahlala bejolise koko bakuphumezayo ukubamba ingqalelo yabo.
Isenokubonakala ngathi yinto encinci, nangona kunjalo, kuyangqinwa ukuba kwivenkile yeencwadi, kwezinye iimeko, abathengi bayifumana kakhulu inomdla ngakumbi kwaye inomdla inoveli eneqweqwe elihle okanye elihlekisayo hayi inesiciko esilula nesidinayo, nokuba zithini na iinoveli.
Ku upapasho lomhleli Yonke into ibalulekile, zombini ikhava kunye ne-typography, kunye nemida kunye nemibala esetyenzisiweyo, ukongeza kwi ubeko lombhalo kunye nemifanekiso. Imicimbi nganye engaphambili isekwe ngokobuntu bopapasho ngalunye, uluntu ekubhekiswa kulo kwaye kunjalo, umxholo uboniswe kuyo.
Akunakwenzeka ukuba uyilo olufanayo encwadini oluthetha ngamayeza, njengakwimagazini yeendaba ethetha ngentliziyo kwaye umsebenzi wabayili ukufezekisa ukubamba undoqo walo lonke upapasho kunye nokuhambisa ngokuchanekileyo imeko nganye nganye kuyilo lwabo.
Impumelelo ye iposi elungileyo Ayisekelwanga kuphela kumgangatho kunye nobungakanani bomxholo onawo, kodwa ikwafuna ubudlelwane obuhle phakathi kwefom yokupapashwa kunye noyilo lwayo, ukongeza kwindlela eboniswa ngayo.
Nje ukuba umlinganiswa wopapasho esekwe, kufuneka ukhethe izinto ezithile ezibonakalayo, kuthathelwa ingqalelo oku kulandelayo:
Izinto okanye inkxaso: Ikhadibhodi, iintlobo ezahlukeneyo zamaphepha, phakathi kwabanye.
Ifomathi: Imagazini, incwadi, iphephandaba, phakathi kwezinye.
Ukufundeka ngokuchwetheza: Ubungakanani bohlobo lohlobo kunye nefonti, umbala, isithuba somgca kunye nendawo phakathi koonobumba
Umfanekiso: Umgangatho, ubeko, ubungakanani kunye nombala.
Ibhokisi yokuchwetheza: Isakhelo sephepha.
Igridi yokuhlela okanye igridi: Isixhobo osisebenzisayo ukulungiselela ulwazi.
Ezi zinto kufuneka zisetyenziswe ngolandelelwano kunye nokudibana kunye, ewe, kunye nomxholo, ngendlela yokuba inqaku lokugqibela yibe yincwadi ehluke kwaphela, eyintsusa enobuntu bayo kuhlobo olujongana nayo kunye nentengiso ekuyo. Ngokufezekisa umxube ogqibeleleyo wefom kunye nomxholo, kuya kuba lula ukwakha uluntu lwabafundi abathembekileyo abakhuthaza upapasho olunobomi obude kwishishini lokupapasha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ithetha ntoni uyilo lokuhlela?
Izenzo ezisibhozo zeFotohop ongenakuziphosa